आज बीपीको ३० औं स्मृति दिवस
गेर्खा कप आजबाट सुरु हुँदै
आज बीपीको ३० औं स्मृति दिवस Posted on: 2012-07-21
काठमाडौं, ६ साउन (ओएनएस) : पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आज ३० औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने भएको छ । आफ्नो जीवन प्रजातन्त्रका लागि लडेका बीपीलाई नेपलका एक राजनेताका रुपमा दिइन्छ । विस १९७१ साल भदौ २४ गते भारतको वनारसमा जन्मिएका बीपीको २०३९ साल साउन ६ गते क्यान्सर रोगका कारण निधन भएको थियो ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याएपछि बीपी प्रधानमन्त्री भएका थिए । कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएकै समयमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई वर्खास्त गरेर बीवीलाई जेल हालेका थिए । लामो समय सुन्दरीजलको जेल जिवनसँगै भारतमा प्रवासमा रहेका कोइराला २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फकिएका थिए । राजनैतिमा राजनेता रहेका बीपीले नेपाली साहित्यिकमा पनि एक महना व्यक्तित्वका रुपमा चिन्छिन् । नेपाली आख्यानमा मनोवैज्ञानिक धाराका सुरुकर्ताका रुपमा रहेका छन् । उनका सुम्निमा, मोदीआइन, बाबु-आमा-छोरा, नरेन्द्रदाई, तीन घुम्ती, हिटलर र यहुदी नामका उपन्यास तथा दोषी चश्मा र श्वेत भैरवी कथा संग्रह, जेल जर्नल, बीपीको आत्मवृतान्त, बीपीका विचारहरुलगायतका कृति प्रकाशित छन् । Comments
• गेर्खा कप आजबाट सुरु हुँदै
'टाउकोमाथि गोली बर्सिएजस्तो लाग्यो'
...त्यसपछि किताबमा पटक्कै ध्यान गएन । दाइभाउजूको कोठातिर कान थापेँ । केही सुनिएन । सबैतिर सामसुम्म छ । मुटु ढुकढुक गर्न थाल्यो । उठेँ । किताब त्यत्तिकै तकियामाथि राखेँ । खाटमा टुक्रुक्क बसेँ । को होला बाहिर ? यो कफ्र्यूमा को हिँडिरहेको होला ? भर्खरै त्यहाँबाट आएको ! केही थिएन ! गस्तीमा हिँडेका प्रहरी हुन् कि ? कतै माओवादीहरू त आएनन् ?
काठमाडौं, ९ जेठ (ओएनएस) : साविकको ब्रिटिस गोर्खा कप फुटबल विहीबार गोर्खा कपको रुपमा शुरु हुदैछ । राजधानीको दशरथ रंगाशालामा हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा सरस्वती क्लव र मछिन्द्र क्लव भिड्ने छन् । त्यस्तै आजै हुने अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लव र झापाको मुनाल क्लव एक अर्का विरुद्ध मैदानमा उत्रने छन् । दोस्रो खेल एन्फा टेक्निकल मैद..विस्तृतमा